alshabaab Archives - Galmada.net
Xog dheerad ah oo laga helaayo sida foosha xun oo ay Shabaab u dileen 2 Ajnabi oo ka tirsaneyd
Maleeshiyada Shabaab ayaa toogasho ku fulisay Ajaaniib kasoo jeeday dalka India, kuwaa oo kamid ahaa Dagaalyahanadooda. Maleeshiyada ayaa dilka labadaani Ajnabi ka fulisay Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, waxa ayna ku eedeeyen inay basaas u ahaayen dowladaha reer Galbeedka. Labada ruux ee Ajaaniibta ah ayaa maleeshiyada Al-shabaab u qaabilsanaa dhanka xiriirka caalamiga, waxaana ugu […]
Rasmi: Filimka DJ Iyo Lacagaha Uu Gudaha Hindiya Iyo Daafaha Caalamka Kasoo Xareeyay Isbuuca Koowaad
Filimka Stylish Star Allu Arjun ee Duvvada Jagannadham (DJ) ayaa ganacsi wanaagsan sameeyaya isbuuc koowaad ee uu tiyaatarada saaran yahay. Sida Ay xaqiijisay Shabakada Andhara Boxoffice filimak DJ wuxuu isbuuciisa koowad dhul weynaha Telugu Ap/Nisam ka keenay 50.28 Crore lacagaha nadiifka ay ka heleen kooxda cajaladaha qeybiyeen halka lacagaha guud uu keenay 70.20 crore. Filimka […]
Waxaa hori idinla wadaagnay in la hadal haayo Saif Ali Khan gabadhiisa Sara Ali Khan filimkeeda koowaad ee bollywood-ka ah u sameyn doonto filim sameeye Abhishek Kapoor. Waxaana filimkaas hogaamiye ka ah Sushant Singh Rajput filim sameeye Abhishek Kapoor ayaana dib u soo laaban doono maadaama in mudo ah uu filim sameynin waxaana filimkiisa mar […]
Al-Shabaab ayaa markii u horeysay soo bandhigay muuqaal uu ku jiro Hoggaamiyihii hore Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaanay Mukhtaar C/raxmaan Abuu Zubeyr, iyadoo muuqaalkan looga sheekeynayo taariikhdiisa nololeed. Muuqaalkan oo soconaya 1:24 ayaa waxaa lagu arkayaa Abuu Zubeyr oo xiran dhar madow, kuna hubeysan qoriga AK47, sidoo kale waxaa looga hadlayaa taariikhdii Islaamiyiinta Soomaaliya, […]
MUUQAAL: Qaraxii Ka dhacay Saldhiga Degmada Waaberi ee Muqdisho iyo Khasaare Ba,an oo ka dhashay
Ugu yaraan siddeed qof ayaa ku geeriyootay, tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay Saldhigga booliska degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qarax oo loo adeegsaday baabuur nooca Surf loo yaqaan ayaa lala beegsaday saldhigga, sida uu kusoo warramay weriyaha VOA ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad, oo ka ag […]